ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အသုံးဝင်စေမယ့် ဆေးနည်းပေါင်းစုံ – Suehninsi
ချောင်းဆိုးလျှင်.ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင်း ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ..ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ ။ နှာပိတ်သော်..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ ။တက်လျှင်.ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် ။ရေငတ်ဝမ်းကျ ..
ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်းကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ ။ကင်းထိုးသော်.ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ ။ကြို့ထိုးလျှင်ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား ။ခရုသင်း..ကျည်းသီးဆန်ကိုဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည် ။
ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်.ကှိတမြှနရြှကယြိုထိုးစားပွောကြ၏ ။ခါးနာ ခါးကိုက်ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ ။ငှက်ဖျားထလျှင် ..မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ ။ခံတွင်းပျက်လျှင်..ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပေးပါ ။ခေါင်းတခြမ်းကိုက်လျှင်.ကျည်းသီးဆန်ကို
ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့်သွေးလိမ်းပေးပါ ။စကားထစ်လျှင်. . နံနက်တိုင်းမြင်းခွာရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက် နေ့စဉ်စားပေးပါ ။စအိုယားနာ.ကြိတ်မှန်ရွက် အရည်ညှစ်၍စအိုဝတွင် သုံးလေးကြိမ်သုပ်လိမ်းပေးပါ ၊ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းလာပါလိပ်မည် ။ဆီးချုပ်လျှင်.ငုပင်၏ အနှစိုကိုသွေး၍ ချက်အောက်မကြာခဏ လိမ်းပေးပါ ။
ဆီးတစက်စက်ကျလျှင်ကြက်သွန်နီကိုပြုပ်၍ အရည်ကိုသောက်ပေးပါ ။ဆီးချုပ်လျှင် ဆီးများစေရန် ကြက်သွန်နီ အစိမ်းများများ စားပေးပါ ။ဆီးအောင့်ကျောက်တည်လျှင်ကြာဟင်းရွက်ကိုနွားနို့ နှင့်သကြားရော၍ နေ့စဉ်စားပေးပါ ။ဆီးချိုဖြစ်လျှင် .ခံတက်ခေါက်ကို လေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ သောက်ပါ ။ဆီးအနှစ်ကျလျှင်..သင်္ဘော ရွက် သုံးရွက်ကိုထန်းလျက် သုံးခဲ ၊ဆားအနည်းငယ် ထည့် ၊
သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၊ တနေ့လုံးသောက်ပေးပါ ။ ဆီးပူလျှင်..ဆီးသွားသောအခါ ပူလိုက်တာ စားပါ ဗူးသီးပြုတ်။ဆံပင်ပြန်ပေါက်ဆေးသံပုရာစေ့ကိုရေနှင့်ကြိတ် ၊ နေ့စဉ်ဆံပင်ကိုလိမ်းပေးပါ ၊ ဆံပင်ပြန်ပေါက်၏တင်းတိပ်.နနွင်းနှင့် ငဖြူကြီးအစေးကိုသွေးလိမ်းပေးပါ ။ဓာတ်ချုပ်လျှင် ထန်းလျက်နဲ့မန်ကျီး ကို ဆားမြတ်မြတ်ထည့်၍ တည်ပြီးစားလျှင် ဝမ်းသက် ဝမ်းမှန်၏ ။
နားကိုက်လျှင်..ကြက်သွန်နီကိုမီးဖုတ် ၊ အရည်နွေးနွေးနားထဲထည့် နားကိုက်ခြင်းပျောက်၏ ။နားအူ နားလေထွက်လျှင်.သဘောင်္ရှကြ မီးအုံး၍ အတို့အမြှုပ်လုပ်စားပေးပါ ။ နားပြည်ယိုလျှင်.ကျီးအာသီးကြိတ်ဖတ်ကို အုန်းဆီနှင့်ရော၍ကြက်တောင်နှင့်ကျပ်ပေးပါ ။နားအတွင်းပိုးကောင်ဝင်လျှင်.ခရမ်းကစော့သီးကိုမီးရှို့ပြီး အခိုးခံ မုန်ညင်းဆီနှင့်နားကိုကျပ်ပေးပါ ။နို့ကြောင်းပိတ်လျှင်.ကြိတ်မှန်ရွက်ကို ငါးကြင်းသားကင်နဲ့
ချက်စားပေးပါ ။နို့လှိုင်လှိုင်ထွက်ဆေးစမြိတ်စေ့ကို လှော်၍စားလျင်နို့ထွက်ကောင်း၏နှလုံးရောဂါဖြစ်လျှင်.. ခရေပင်၏အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပါ ၊ အပွင့်ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမြစ်ပြတ်ပျောက်၏ ။နှခေါင်းသွေးလျှံလျှင်ငှက်ပျောပင်မှ ထွက်သော အစေးကို ရှူပေးပါ ။နှာခေါင်းအနံ့ မရသောရောဂါ ဖြစ်လျှင်. ကြိတ်မှန်ရွက် ညှစ်၍ရသောအရည်ကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။ဆေးနည်း ၁၀၀၀ စာအုပ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မိတ်ဆွေတို့ရေ ဒီpostလေးကိုရှယ်ထားခြင်းဖြင့် မိမိတို့လိုအပ်တဲ့အခါအသုံးပြုနိုင်ဖို့အချိန်မရွေးဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်။
ခြောငျးဆိုးလြှငျ.ခရပှေငျ့ကိုတညလုံးရစေိမျ၊ နံနကျတှငျး ထိုရကေိုစဈ၍သောကျပါ ၊ပြောကျ၏ ။ ရငျပွညျ့ရငျကယျ ..ကွကျဟငျးခါးသကျစောငျ့ဆေးကို နှမျးဆီ ပရုပျဆီဖွူ ဖွငျ့ဖြျော၍ ရငျမှအသာအယာသပျခပြါ ။ နှာပိတျသျော..ကွိတျမှနျရှကျ ခှေးသေးပနျးရှကျ နှဈပါးကွိတျ ၊ ရှိနျးခိုနဲနဲထညျ့ ၊ ငယျထိပျမှနှာခေါငျးအထိဆေးအရညျနှငျ့ဆှဲပေးပါ ။တကျလြှငျ.ဆငျငိုမွကျပွုပျရညျကိုတိုကျပါ ။ အတကျခကျြခငျြးကသြှားမညျ ။ရငေတျဝမျးကြ ..
ဆီးသီးအစအေ့တှငျးမှအဆနျးကို အမှုနျ့ပွု၍ နှယျခြိုနှငျ့ရောပွီးစားပေးပါ ။ကငျးထိုးသျော.ကငျးကိုကျ ကငျးထိုး ဒဏျရာ ငဖွူကွီးမွဈသှေးလိမျးပါ ။ကွို့ထိုးလြှငျကွကျသှနျးနီကိုထနျးလြှကျနှငျ့နိုငျးခငျြး ကွိတျ၍စား ။ခရုသငျး..ကညျြးသီးဆနျကိုဆနျဆေးရညျနှငျ့တှဲစပျ၍ ရကျပေါငျးမြားစှာစားရပါသညျ ။
ခွတေုနျလကျတုနျဖွဈလြှငျ.ကှိတမွှနရွှကယွိုထိုးစားပှောကွ၏ ။ခါးနာ ခါးကိုကျညောငျခွထေောကျပငျ၏ နို့စေးရညျလိမျးပေးပါ ။ငှကျဖြားထလြှငျ ..မွငျးခှာရှကျရညျကို ငရုပျကောငျးနှငျ့အမြှစီကွိတျ၍ သောကျပါ ။ခံတှငျးပကျြလြှငျ..ကွိတျမှနျရှကျယိုထိုးစားပေးပါ ။ခေါငျးတခွမျးကိုကျလြှငျ.ကညျြးသီးဆနျကို
ဆိတျကငျြငယျရညျနှငျ့သှေးလိမျးပေးပါ ။စကားထဈလြှငျ. . နံနကျတိုငျးမွငျးခှာရှကျ တဈရှကျနှဈရှကျလောကျ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။စအိုယားနာ.ကွိတျမှနျရှကျ အရညျညှဈ၍စအိုဝတှငျ သုံးလေးကွိမျသုပျလိမျးပေးပါ ၊ ဝမျးတှငျးရှိ ပိုးမြားကဆြငျးလာပါလိပျမညျ ။ဆီးခြုပျလြှငျ.ငုပငျ၏ အနှစိုကိုသှေး၍ ခကျြအောကျမကွာခဏ လိမျးပေးပါ ။
ဆီးတစကျစကျကလြှငျကွကျသှနျနီကိုပွုပျ၍ အရညျကိုသောကျပေးပါ ။ဆီးခြုပျလြှငျ ဆီးမြားစရေနျ ကွကျသှနျနီ အစိမျးမြားမြား စားပေးပါ ။ဆီးအောငျ့ကြောကျတညျလြှငျကွာဟငျးရှကျကိုနှားနို့ နှငျ့သကွားရော၍ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။ဆီးခြိုဖွဈလြှငျ .ခံတကျခေါကျကို လေးခှကျတဈခှကျတငျကြို၍ သောကျပါ ။ဆီးအနှဈကလြှငျ..သင်ျဘော ရှကျ သုံးရှကျကိုထနျးလကျြ သုံးခဲ ၊ဆားအနညျးငယျ ထညျ့ ၊
သုံးခှကျတဈခှကျတငျကြို၊ တနလေုံ့းသောကျပေးပါ ။ ဆီးပူလြှငျ..ဆီးသှားသောအခါ ပူလိုကျတာ စားပါ ဗူးသီးပွုတျ။ဆံပငျပွနျပေါကျဆေးသံပုရာစကေို့ရနှေငျ့ကွိတျ ၊ နစေ့ဉျဆံပငျကိုလိမျးပေးပါ ၊ ဆံပငျပွနျပေါကျ၏တငျးတိပျ.နနှငျးနှငျ့ ငဖွူကွီးအစေးကိုသှေးလိမျးပေးပါ ။ဓာတျခြုပျလြှငျ ထနျးလကျြနဲ့မနျကြီး ကို ဆားမွတျမွတျထညျ့၍ တညျပွီးစားလြှငျ ဝမျးသကျ ဝမျးမှနျ၏ ။
နားကိုကျလြှငျ..ကွကျသှနျနီကိုမီးဖုတျ ၊ အရညျနှေးနှေးနားထဲထညျ့ နားကိုကျခွငျးပြောကျ၏ ။နားအူ နားလထှေကျလြှငျ.သဘောင်ျရှကွ မီးအုံး၍ အတို့အမွှုပျလုပျစားပေးပါ ။ နားပွညျယိုလြှငျ.ကြီးအာသီးကွိတျဖတျကို အုနျးဆီနှငျ့ရော၍ကွကျတောငျနှငျ့ကပျြပေးပါ ။နားအတှငျးပိုးကောငျဝငျလြှငျ.ခရမျးကစော့သီးကိုမီးရှို့ပွီး အခိုးခံ မုနျညငျးဆီနှငျ့နားကိုကပျြပေးပါ ။နို့ကွောငျးပိတျလြှငျ.ကွိတျမှနျရှကျကို ငါးကွငျးသားကငျနဲ့
ခကျြစားပေးပါ ။နို့လှိုငျလှိုငျထှကျဆေးစမွိတျစကေို့ လှျော၍စားလငျြနို့ထှကျကောငျး၏နှလုံးရောဂါဖွဈလြှငျ.. ခရပေငျ၏အခေါကျပွုတျရညျကို သောကျပါ ၊ အပှငျ့ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမွဈပွတျပြောကျ၏ ။နှခေါငျးသှေးလြှံလြှငျငှကျပြောပငျမှ ထှကျသော အစေးကို ရှူပေးပါ ။နှာခေါငျးအနံ့ မရသောရောဂါ ဖွဈလြှငျ. ကွိတျမှနျရှကျ ညှဈ၍ရသောအရညျကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။ဆေးနညျး ၁၀၀၀ စာအုပျမှ ကူးယူမြှဝသေညျ။
မိတျဆှတေို့ရေ ဒီpostလေးကိုရှယျထားခွငျးဖွငျ့ မိမိတို့လိုအပျတဲ့အခါအသုံးပွုနိုငျဖို့အခြိနျမရှေးဝငျဖတျလို့ရပါတယျ။